မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝန်းလုံးရှိ မြန်မာစာတတ်မြောက်သူတိုင်း ကွန်ပျူတာကို အသုံးပြုနိုင်၍ သတင်းအချက်အလက်များ ရယူအသုံးချနိုင်ရန်၊ နယ်ပယ် အသီးသီးတွင် ကွန်ပျူတာသုံးစနစ်များကို မြန်မာဘာသာဖြင့် အသုံးချနိုင်ရန် စသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျန်ရှိနေသော လုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ စစ်ဆေးခြင်း၊ ကမ္ဘာသုံးဘာသာစကားအမျိုးမျိုးကို မြန်မာဘာသာသို့ ကွန်ပျူတာဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း၊ စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အဆင့်မြင့်မြန်မာစာသုံးစနစ်ကို ပိုမို ထိရောက်မြန်ဆန်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် ဝန်ကြီးချုပ်ရုံး၏ ၁၄-၁၁-၂၀⁠၀၅ ရက်နေ့စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၃၅/၂၀⁠၀၅ ဖြင့် အီလက်ထရောနစ် အမျိုးသားအဆင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်း ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးစီးသော ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစံနစ် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအဖွဲ့ကို တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။[လင့်ခ်သေ]
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် မြန်စံ(Smart)စာစီစာရိုက်စနစ်ကို အများပြည်သူအသုံးပြုနိုင်ရန် မိတ်ဆက်ဖြန့်ချိသည်။  Archived2October 2011 at the Wayback Machine.
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် မြန်မာ ယူနီကုဒ် အသုံးပြုသူ လမ်းညွှန်၊ မြန်စံ(Smart)စာစီစာရိုက်စနစ်၊ Myanmar3 ဖောင့်တို့ကို အစိုးရဌာနများသို့ ဖြန့်ဝေနိုင်ရန် ကူညီပံ့ပိုးခဲ့သည်။ Archived 25 April 2012 at the Wayback Machine.
ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာနစ် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအဖွဲ့မှ ထုတ်လုပ်ထားသော ကွန်ပျူတာသုံးစနစ်များကို အများပြည်သူ အသုံးပြုနိုင်ရန် ဖြန့်ချိထားသည်။ အဆိုပါ စနစ်များကို ဒေါင့်လုတ်ခ် Archived2October 2011 at the Wayback Machine. ရယူနိုင်သည်။
Myanmar NLP Webiste Archived 17 July 2011 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကွန်ပျူတာသုံး_မြန်မာစာစနစ်_အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအဖွဲ့&oldid=639065" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၁:၁၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။